कमेन्ट पनि रंग्याउँदै फेसबुक !
अमेरिका । फेसबुकले पछिल्लो समय केही नयाँ फिचरको परीक्षण गरिरहेको छ । यसमा रंगीन ब्याकग्राउण्डवाला स्टाटसजस्तै कमेन्टलाई पनि रंगीन बनाउन परीक्षण गरिरहेको बुझिएको छ । यो फिचरमा कमेन्टहरु रंगविरंगका देखिनेछन् । अहिले कमेन्टहरु सामान्य रहेका छन् ।
द नेक्स्ट वेबमा छापिएको एउटा रिपोर्टअनुसार केही प्रयोगकर्ताहरुको कमेन्ट रंगीन बनाउने विकल्प दिइएको खुलेको छ । जसअनुसार ब्याकग्राउण्डको कलर आआफ्नो स्टाटसमा मिलाउन सकिनेछ । फेसबुकले २०१६ मा एण्ड्रोइडमा रंगीन स्टाटसवाला फिचर ल्याएको थियो ।
यद्यपि यसबारे केही आधिकारिक कुरा बाहिर आइसकेको छैन । भर्खरै मात्र फेसबुकले वाट्स एपमा पनि रंगीन ब्याकग्राउण्डमा स्टाटस लेख्ने फिचर जारी गरेको थियो । फेसबुकका एक प्रवक्तााका अनुसार रिपोर्टमा जनाइएअनुसार फेसबुक मानिसहरुबीच संवाद स्थापित गर्न नयाँ नयाँ तरिका खोज्न लागिपरेको छ ।
त्यस्तै सोही वेबसाइटमा छापिएको अर्को रिपोर्टअनुसार फेसबुकको स्टोरिज फिचर पनि इन्स्टाग्रामसँगै मर्ज हुनेछ । यसको मतलब हामीले इन्स्टाग्राममा जुन स्टोरी राख्नखोज्छौँ, फेसबुकमा पनि राख्ने अप्सन थपिनेछ ।
फेसबुकको सफ्टवेयर गडबडीले १ करोड ४० लाख प्रयोगकर्ताको निजी कुरा सार्वजनिक
न्युयोर्क । विश्वकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फोसबुकले बिहीबार आफ्नो सफ्टवेयरमा गडबडी भएको स्वीकारेको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त गडबडीले १४ मिलियन अर्थात् एक करोड ४० लाख प्रयोगकर्ताको निजी डाटा पब्लिक
युगान्डामा सामाजिक संजाल फेसबुक, ट्वीटर चलाए कर तिर्नुपर्ने !
काठमाडौँ । युगान्डाको संसदले सामाजिक संजालमा कर लगाउने कानुन पास गरेको छ । अब यो कानुन पास भएपछि फेसबुक, ट्वीटरलगायतका अन्य सामाजिक संजाल प्रयोग गर्नेहरुले युगान्डामा सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने
रुसको संसदमा सम्बोधन गर्न फेसबुकका संस्थापक जुकरबर्गलाई निमन्त्रणा
मस्को । रुसको माथिल्लो सदनका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । सदनको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्नेगरी उहाँलाई निमन्त्रणा गरिएको सभामुख भ्यालेन्टाइन मत्भीयेन्कोले बुधबार जानकारी दिए । “हामीले
सन्दीपले गरे फेसबुक लाइभ मार्फत फ्यानहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट आइपिएल खेलिरहेका नेपाली युवा बलर सन्दीप लामिछानेले दिल्ली टिममा आफ्नो अनुभव निकै महत्वपूर्ण भैरहेको बताएका छन् । मंगलबार दिउँसो आफ्ना फ्यानहरुसँग दिल्ली डेयरडेभिल्सको फेसबुक पेज लाइभमार्फत कुरा